« Jakoba »
« Jakoba 1 [MDG - malagasy] »
1:1 Jakoba, mpanompon’Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo, mamangy ny foko roa ambin’ny folo monina any am-pielezana.
1:2 Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa, raha iharan' ny fakam-panahy samihafa ianareo,
1:3 Satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana.
1:4 Fa aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy feno ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona.
1:5 Raha misy ianareo tsy ampy fahendrena, aoka izy hangataka amin’Andriamanitra, Izay manome malalaka ho an' ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia homena azy izany.
1:6 Nefa aoka hangataka amin’ny finoana izy ka tsy hiahanahana akory, fa izay miahanahana dia toy ny alon-dranomasina entin’ny rivotra ka atopatopany.
1:7 Fa aoka tsy hanampo handray zavatra amin’ny Tompo izany olona izany:
1:8 "Ny olona miroaroa saina dia miovaova amin’ny alehany rehetra;"
1:9 "Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany ho reharehany;"
1:10 Fa ny manan-karena kosa ny fietreny, satria ho levona tahaka ny vonin’ny ahitra izy.
1:11 "Fa miposaka ny masoandro mbamin’ny hainandro mahamay, dia mampahalazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, ary levona ny hatsaran-tarehiny; dia toy izany koa ny ho fahalazon’ny mpanankarena amin’ny alehany."
1:12 "Sambatra izay olona maharitra fakampanahy; fa rehefa voazaha toetra izy, dia handray ny satroboninahitry ny fiainana, izay nampanantenain’ny Tompo homena izay tia Azy."
1:13 "Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hanao hoe: Andriamanitra no maka fanahy ahy; fa Andriamanitra tsy azon’ny ratsy alaim-panahy, sady tsy mba maka fanahy olona Izy;"
1:14 "Fa samy alaim-panahy ny olona, raha tarihin’ny filàny sy angoleny izy;"
1:15 "Koa ny filàna, rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota, rehefa tanteraka, dia miteraka fahafatesana."
1:16 Aza manao fahadisoana, ry rahalahy malalako.
1:17 Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana, Izay tsy misy fiovaovana na aloky ny fihodinana.
1:18 Tamin’ny sitrapony no niterahany antsika tamin’ny teny fahamarinana, mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika.
1:19 "Noho izany, ry rahalahy malalako, aoka ny olona rehetra halady hihaino, ho malai-miteny, ho malain-ko tezitra;"
1:20 Fa ny fahatezeran' ny olona tsy ahefana izay marina eo imason’Andriamanitra.
1:21 Koa ario ny fahalotoana rehetra sy ny ditra mihoapampana, ary ekeo amin’ny fahalemem-panahy ny teny nambolena, izay mahavonjy ny fanahinareo.
1:22 Fa aoka ho mpanatanteraka ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.
1:23 "Fa raha misy mpihaino ny teny, nefa tsy mpanatanteraka, dia toy ny olona mizaha ny tarehiny eo amin’ny fitaratra izy;"
1:24 Fa mijery ny tenany izy, dia lasa, ary miaraka amin’izay dia hadinony ny tarehiny.
1:25 Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn’ny fahafahana, ka maharitra amin’izany, raha tsy mpihaino mpanadino, fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin’ny asany izany olona izany.
1:26 Raha misy manao azy ho mpivavaka, nefa tsy mamehy ny vavany, fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan’izany olona izany.
1:27 Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan’Andriamanitra sady Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin’ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin’izao tontolo izao.